Orinasa mpanohana ny tànana - Mpanamboatra, tolotra any China
Ny fehin-tànana manangan-tànana
Manohana ny fanasitranana ny ligamente simba sy ny tendons, rivotra marefo sy malefaka avo matevina manampy amin'ny fiarovana ny tànana. Manampy amin'ny fetra ny fehin-tànana amin'ny fikojakojana. Fitaovana fiarovana amin'ny tànana mety ho an'ny olon-dehibe izay tia ny hetsika fanatanjahantena ivelany dia azo antoka fa toy ny bisikileta, bisikileta, manentana fanatanjahan-tena, fanaovana gym sy ny Fitness. Ny fantsom-baravarankely elastika ho an'ny faharetana sy ny tady haingana
Manohana ny fanasitranana ny ligy simba sy tendron-doha, famelomana matevina avo lenta, vonjy maika mba hiarovana ny hato-tànana, dia fisorohana sy fanasitranana amin'ny ratra amin'ny fanatanjahantena. Manampy amin'ny fetra ny fehin-tànana amin'ny fikojakojana. Fitaovana fiarovana amin'ny tànana mety ho an'ny olon-dehibe izay tia ny hetsika fanatanjahantena ivelany dia azo antoka fa toy ny bisikileta, bisikileta, manentana fanatanjahan-tena, fanaovana gym sy ny Fitness.
Ny fehin-tànana ankavanana
Fanohanana ny tànana ankihibe
Manome fanohanana miadana amin'ny haino aman-jery amin'ny tànana naratra. Manampy amin'ny fanamaivanana ny soritr'aretina mifandraika amin'ny Carpel Tunnel Syndrome Plush, ny fanaovana koba dia miaro ny tananao amin'ny torimaso. Ny vakana koba dia manampy amin'ny fampiroboroboana toeran'ny tanana tsy miandany mandritra ny torimaso. Solon-tanana azo esorina ho an'ny fanohanana mety. Mifanaraka amin'ny tanana havanana na havia. Mirehitra, mateza ary malefaka.
Fanohanana ny tànana vita amin'ny alumina